လက်ရှိမြန်မာ့စီးပွားရေး အလားအလာမှာ ခေတ်ရှေ့ပြေးလာတဲ့ Stock Exchange ဆိုတာကတော့ Economic System (စီးပွားရေးစနစ်) များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Market Capitalism (ဈေးကွက်အရင်းအနှီးစနစ်) ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ စတော့ကို ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဆောင်ရွက်ရာမှာ စတော့အမျိူးအစားများကို သိဖို့ ဆိုတာအရေးကြီးလာပါတယ်။ Stock စတော့ အမျိူးအစား(3) မျိုးရှိပါတယ်။
1. Income Stocks လို့ ခေါ်တဲ့ (ပုံမှန်ဝင်ငွေ စတော့)
2. Growth Stocks လို့ ခေါ်တဲ့ (တိုးပွားနန်း စတော့)
3. Value Stocks လို့ ခေါ်တဲ့ (ဈေးနိမ့် စတော့) တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
( 1 ) Income Stocks ( ပုံမှန်ဝင်ငွေ စတော့) အများပိုင် ကုမ္မဏီအများစု က နှစ်စဉ် စာရင်းချုပ်ပြီး အမြတ်အရှူံး စာရင်း၊ ငွေဝင် ငွေထွက် စာရင်း တို့ ကို ပြည်သူ ကို ထုတ်ပြန်ကြေငြာ ရပါတယ်။ ကုမ္မဏီ အနေ နဲ့ ရလာတဲ့ အမြတ်ငွေကို ကုမ္မဏီ ရဲ့ လုပ်ငန်း မှာ ပြန်လည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံ နိုင်သလို ရှယ်ယာပိုင်ရှင် တွေကို အမြတ်ငွေ ခွဲဝေပေးနိုင်ပါတယ်။ ကုမ္မဏီ ငယ်အများစု က ရရှိလာတဲ့ အမြတ်ငွေကို များသောအားဖြင့် ပြန်လည် မြုပ်နှံ လို တဲ့ အတွက် ခွဲဝေပေးလေ့မရှိပေမယ့် ကုမ္မဏီ ကြီးအများစု ကတော့ သူ့ ရဲ့ ရှယ်ယာပိုင်ရှင်တွေထံ အချိူးကျ ခွဲဝေပေးပါတယ်။ အဲဒီ ခွဲဝေပေးတဲ့ ငွေ ကို Dividend ခွဲဝေငွေ လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ပုံမှန်ဝင်ငွေရရှိလိုတဲ့ ရင်းနှီးမျြပ်ျနှံမှူ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များက ဒီလိုပုံမှန်ဝင်ငွေပေးတဲ့ စတော့ရှယ်ယာမျိူးဝယ်ထားလေ့ရှိပါတယ်။ ဘယ်လောက် ရာခိုင်နန်းရသလဲ ဆိုတာကတော့ သင့် ရဲ့ ရွေးချယ်မှူအပေါ်မှာမူတည်ပြီး 4% က နေ 10% ထိရှိနိုင်ပါတယ်။ ရေနံကုမ္မဏီ ကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ကနေဒီရန်ပိုင် ERF စတော့ ဆိုရင် 10% နီးပါးလောက် Dividend ပေးပြီး ထူးခြားတာကတော့ သူက လစဉ် အမြတ်ငွေခွဲဝေပေးခြင်းပါ။ ဒီ ပုံမှန်ဝင်ငွေ စတော့ များ အကြောင်း ကို ကျွန်တော် နောက်ပိုင်း မှာ အကျယ်ရှင်းပြပြီး ဒီလို စတော့မျိူးဝယ်ထားယုံ နဲ့ ဘာမှ လုပ်စရာမလို ပဲ ဘယ်လို ပုံမှန်ဝင်ငွေ ရရှိအောင် လုပ်မလဲ ဆိုတာ ကို ရေးပြီး ဖော်ပြပေးပါ့မယ်။
(2) Growth Stocks (တိုးပွားနှုန်း စတော့) ဒီစတော့ မျိုးကတော့ ကိုယ်ဝယ်ထားတဲ့ အရင်းအပေါ်မှာ အမြတ်ငွေ ရရှိစေပါတယ်။ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူအများစုက ဒီလို စတော့ မျိူးကို ရှာပြီး ၀ယ်ယူရင်း နှီးလေ့ရှိပါတယ်။ ဘာလို့ လဲဆိုတော့ စတော့အမျိူးအစာ သုံးမျိူးရှိရာ အနက်မှာ ဒီအမျိူးအစားက အမြတ်ငွေ အများဆုံးပေးလေ့ရှိလို့ ပါ။ ဒီလို စတော့ကို ၀ယ်ထားယုံနဲ့ အမြတ်ငွေ ဘယ်လို ရသလဲ ဆိုတော့ ကိုယ်ဝယ်ထားတဲ့ စတော့ ကဈေးတက်လာလို့ ပါပဲ ။ ကိုယ်ဝယ်တုန်းက ဥပမာ $6 ဆိုပါစို့ ။ ကိုယ်က အစုရှယ်ယာပေါင်း 500 ခု ၀ယ်လိုက်တယ်ဆိုပါစို့ ။ နောက် 3လ လောက်ကြာတော့ ကိုယ်ဝယ်ထားတဲ့ စတော့ က6ကျပ်ကနေ $12 ကျပ်ထိ စေးတက်သွားတယ် ဆိုရင် ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ရှယ်ရာပေါင်း 500 ကို သာပြန်ရောင်းလိုက်မယ် ဆိုရင် ကိုယ်မြုပ်နှံထားတဲ့ ငွေပမာဏရဲ့ နှစ်ဆ ပြန်ရမှာပေါ့။ ကိုယ် က ငွေ သိန်း 300 နဲ့ စတယ် ဆိုရင် လပိုင်းအတွင်း ဘာမှ သိပ်လုပ်စရာမလိုပဲ ငွေ သိန်း 600 ရမယ် ဆိုတဲ့ သဘောပေါ့။ ဒီ လိုရဖို့ ဆိုတာ ကျွန်တော် ဥပမာပြသလောက် မလွယ်ပေမယ့်ဖြစ်နိင်ချေအတွင်းမှာရှိပါတယ်။
(3) Value Stocks (ဈေးနိမ့်စတော့) အမှန်တကယ်တော့ ဈေးနိမ့်စတော့၊ ပေါချောင်ကောင်း စတော့ မျိူးကို ပြောတာပါ။ ဒါပေမယ့် ပေါချောင်ကောင်း စတော့ ဆိုတာကတော့ လုပ်ငန်းအလားအလာအားနည်းသည်ဖြစ်စေ၊ လိုငွေပြ-ငွေလိုမှုများသည်ဖြစ်စေ၊ Broker များ၏ ဈေးကစားမှုဖြစ်စေ၊ ရောင်းလိုအားများနေသည့် စတော့များဖြစ်စေ စတဲ့ Stock ဈေးကွက်အတွင်းမှ တချို့သော စတော့ များကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Stock စတော့ဈေးကွက်အတွင်းမှာ (ရောင်းချသူ) – (ပွဲစား) – (၀ယ်ယူသူ) – (ထိန်းချုပ်သူ) စတဲ့ အဓိက ပါဝင်နေမှု (၄) မျိုး၏ အပေါ်မူတည်ပြီး ဖော်ပြထားသော စတော့ အမျိုးအစားတွေကို တွက်ချက်သုံးသပ်ပြီး ရန်ကုန်စတော့အိပ်ချိန်းတွင် စီးပွားရေးရင်းနှီးမြုပ်နှံနိုင်စေဖို့ မျှဝေရေးသားလျှက်။ Original Writer- Martin Zhang